Ngiphatha kanjani ukucwaninga ngegama eliyisihluthulelo ngemikhiqizo ye-Amazon ngendlela efanele?
Namuhla, ama-Amazon abe igama lomndeni losesho lomkhiqizo ku-Intanethi. Futhi wonke umuntu ukhululekile ukuzama ukuphonsela umkhiqizo ngaphesheya - nabathengi abakhuthele abangaba ngu-80 abaqagela ngaphezu kwalokhu inkinga kuphela ukuthi uhlu lwakho lwemikhiqizo kufanele lubonwe ngabathengi abaningi abanakho okungenzeka. Uma sicabanga ukuthi le ndawo emakethe enkulu ine-algorithm yayo yesimo engingayisho ukuthi isebenza ngendlela efana nokuseshwa okuvamile kwe-intanethi eyaziwa ngabasebenzisi emhlabeni jikelele iminyaka engaphezu kwamashumi amabili kakade (isibonelo, nge-Google ngokwayo. ku). Yingakho ngikholelwa ukuthi isihluthulelo sempumelelo yonke isomabhizinisi osomabhizinisi wamanje othengisa ngaphezu kwalezi zimpande ngokuqondile kusukela ekucwaningweni kwegama elingukhiye kuma-Amazon - lente polarizada teste online. Yiqiniso, kunomsebenzi oqinile wokuthengisa okwamanje okudingeka ukuba ube ngumdayisi wangempela wesikhathi eside kuleso sikhulumi esiphezulu. Ungasho ukuthi ngeke uchithe isikhathi sakho uqhuba ucwaningo lokuncintisana ukuze uhole. Noma kunjalo, nginesiqiniseko sokuthi ukufakwa kuhlu kokukhiqizwa komkhiqizo kuyinto yokuqala okufanele iyenze uma kuziwa ekutholeni ukuchayeka okungcono kokuseshwa kwe-intanethi. Yingakho ngenzansi ngizokubonisa ngokufushane indlela yokusingatha ucwaningo lwegama elingukhiye lwe-Amazon - futhi ungangeni emncintiswaneni wokusesha ngemuva kwakho konke.
Ingxenye 1: Amagama angukhiye anguMbewu
Qala ngokucwaninga kwamagama angukhiye ebanzi ngemikhiqizo ye-Amazon ngokumane ubeke okubalulekile ekubhekeni kwe-Google. Ngaleyo ndlela, uzothola isithombe esiphelele sendlela abantu abangase bafune ngayo izinto zakho. Okulandelayo, gxila kumazwi angukhiye omude nemisakazo ethize ehlobene eduze niche yakho. Ngesikhathi esifanayo, kungaba yisinqumo esenziwe kahle ukuhlola abanye abathengisi abaholayo abaqhuba ibhizinisi labo lokuthumela phansi phansi iminyaka. Nakhu lapho zonke lezo mathuluzi okulandelela ngokukhethekile nezinhlaka ze-intanethi ziqala ukudlala.
Umkhakha wesi-2: I-Smart Ideas
Isinyathelo sakho esilandelayo sikhetha ithuluzi lokucwaninga elingamagama elihluthulelo lemikhiqizo ye-Amazon. Ngenhlanhla, kunezinhlobonhlobo eziningi ezihlukahlukene, eziningi zazo zitholakala ekufinyeleleni okuvulekile. Yiqiniso, ezinye zazo zikhokhwa-ukufinyelela kuphela, kepha kusekhona abaningi abasizi abahle nabanokwethenjelwa ngaphandle kokukhokha imali. Ngempela, akuyona i-no-brainer futhi kungcono kuwe ukuthi unqume ukuthi yikuphi ithuluzi okufanele ukhethe - empeleni iningi lawo lihlelwe ngokuyinhloko ekusesheni kwegama elingukhiye ukuze likunikeze iziphakamiso zokuncintisana eziwusizo ekugcineni.
Isigaba 3: Ukuhlaziywa kwamamethrikhi
Futhi lapha sifikile ekugcineni. Into ewukuthi uma uqhuba ucwaningo lwegama eliyisihluthulelo ngemikhiqizo ye-Amazon kungenzeka ukuthi ukhululeke ngokweqile ngezinkulungwane zemibono eyinhloko yemfihlo. Ngakho, inselelo enkulu ukukhetha ukuthi yiziphi ezifanele ngempela futhi zifanelwe ukuthola kuhlu lwakho olufushane. Ngaleyo ndlela, qiniseka ukukhokha ngokuqondile amamethrikhi angukhiye alandelayo:
ivolumu yosesho - imetric core ebonisa ukuthi bangaki abantu ngezwe basebenzisa igama lakho elingukhiye kwisicelo sombuzo wokusesha .
Ukuchofozwa - kubonisa amathemba ajwayelekile wegama elingukhiye ukukhiqiza ithrafikhi kanye nokusetshenziswa njalo ngabathengi.
Isimo esibucayi - ngaphandle kwalokho, ubunzima begama elingukhiye, okufanele ulinganise ukuthola imisho emfishane yokucinga eyayizohambisa imoto eminye ohlwini lwakho lomkhiqizo.